Scissor Simudza Vagadziri & Vatengesi | China Scissor Lift Fekitori
Aerial Scissor Simudzachikuru chigadzirwa muAerial Indasitiri. Daxlifter Iine yepamusoro-scissor simudza kumusika wepasi rose Pane mhando yakati wandei yatinofanira kuzivisa:
China Daxlifter Rough Terrain Crawler Scissor Lift neRutsigiro Gumbo ndeye modhi yekuvandudza kubva kune chinokambaira icho chisina otomatiki rutsigiro gumbo Iyi ichave yakakodzera kushanda pane imwe mwenje mutserendende uye imwe nzvimbo yekushandira ine yakadzika gomba zvichingodaro.
China Daxlifter Rough Terrain Crawler Scissor Simudza dhizaini yakasarudzika yenzvimbo yakaipa yekushandira, chinokambaira dhizaini chinopa rubatsiro rwakanaka rwekusimudza kuenda kune chimwe chipingaidzo chakaipa. Semuenzaniso, huswa, imwe yakaoma kuvaka nzvimbo nezvimwewo .. Ichi chinokambaira chigero simudza don ' t ndine otomatiki rutsigiro gumbo
Iyo yekuzvifambisa yega scissor simudza chishandiso chakanyanyisa kushanda. Vashandi vanogona kumira pachikuva kudzora kufamba nekusimudza michina. Kubudikidza neiyi mashandiro maitiro, hapana chikonzero chekudzikisa chikuva pasi kana chinzvimbo chinoshanda che mobile ...
Iyo inofambiswa inofambiswa yeself scissor lift inokodzera mashandiro-epamusoro-soro, kusanganisira kukwirisa-kwakakwirira kwemidziyo, kuchenesa girazi uye kununura kwakakwirira-kwakakwirira. Midziyo yedu ine yakasimba dhizaini, yakapfuma mashandiro, uye inogona kuchinjika kune akasiyana siyana ekushanda nharaunda.
Iyo Yakasiyana pakati peiyo hydraulic inozvisundira scissor kusimudza uye nemagetsi kutyaira scissor kusimudza ndeyekuti iyo imwe inoshandisa hydraulic system kuita kuti vhiri rifambe, imwe inoshandisa mota yemagetsi inoisa pane vhiri kuti kusimudzira kusimuke.
1) Semi Electric mobile scissor lift, Ruoko rwokusimudza rwakagadzirwa ne-high-simba manganese simbi rectangular chubhu, uye pakaunda panogadzirwa isina-kutedzemerwa pateni yesimbi kana gumbeze repurasitiki kuona kuti vashandi havazotsvedza padhesiki. Yakashongedzerwa necompetop control switch kuti udzivise kusabatana. Shandisa iyo hydraulic cylinder inogadzirwa naSeiko kuve nechokwadi chekushanda kwekushanda kwemidziyo yese. Panguva imwecheteyo, chiteshi chedreyidhi ye hydraulic cylinder yakagadzirirwa imwe-nzira yekuvhara vharuvhu kudzivirira tafura kuti irege kudonha nekuda kwekutadza kwetubhu. Uye zvakare, iyo michina inogona kuve yakagadzirirwa nerubatsiro rwemagetsi kufamba. Iyo michina iri nyore uye inochinjika kufamba, ichiita yakakwirira-nzvimbo mashandiro kuve nyore uye inoshanda. Iyo yakanaka yekukwirira-kukwirisa mashandiro ekushandisa ekumusoro-kugona uye kugadzirwa kwakachengeteka kwemabhizimusi emazuva ano. 3) Rough Terrain Scissor lift, Cross-country self-propelled michina ine yakazara yakazara seti yekuzvidzikamisa-system uye matairi epasirose-nyika. . Iyo inokodzera dzakasiyana siyana dzakaomarara uye dzakaomarara nzvimbo dzekushanda. Semuenzaniso, ivhu harina kuenzana, rine matope, nezvimwe. Uye rinogona kuita kusimudza mashandiro mukati meimwe kona yekukomberedza. Panguva imwecheteyo, isu takagadzira hombe yekushanda chikuva uye muhombe mutoro wacho, unogona kugutsa vana kana vashanu vashandi vanoshanda patafura panguva imwe chete.